Uhie Red agaghị akwụsị mgbe ịzụrụ IBM | Site na Linux
Ọtụtụ na-eche banyere ọdịnihu nke okpu uhie mgbe nyochara nke a site na IBM, dịka anyị mụtara n'izu gara aga. Somefọdụ mgbasa ozi ekwuola na nke a nwere ike imetụta Linux ma ọ bụ ụwa nke ngwanrọ mepere emepe n'ozuzu ya, ebe ọ bụ na nzụta ahụ nwere ike ịpụta ngbanwe na ụkpụrụ na nkà ihe ọmụma ndị duziri Red Hat n'oge afọ ndị a, na IBM ga-enye ntụgharị na-adịghị arụpụta maka obodo, mana ọ nweghị nke a bụ eziokwu.
Edeela m ya na LinuxAdictos blog, na Sọnde gara aga mgbe m nụsịrị akụkọ ahụ, IBM bụ ụlọ ọrụ nyerela ọtụtụ aka na mmepe nke kernel Linux, ha etinyela usoro a n'ọtụtụ n'ime nnukwu kọmputa ha, sava na isi ihe, ma nyekwa aka ya na Linux Foundation. IBM abụghị onye iro, ma ọ dịbeghị, kama ọ bụ nnukwu enyi. N'ezie, amaghị m ma ọ bụrụ na ị cheta na ọbụnadị asịrị na kernel nke 2.7 ga-emepe onwe ya site na IBM n'onwe ya ... Ma ọbụlagodi na ọ zụtala otu nnukwu ụlọ ọrụ mmeghe, Red Hat, nke ahụ agaghị emetụta ihe ọ bụla.
Ọ ga - abụ ihe na - edozi ahụ maka ndị na - acha anụnụ anụnụ, nke ga - enwe ike ịsọ mpi Igwe ojii Google, AWS (Ọrụ Weebụ Amazon) na Microsoft Azure, nnukwu atọ na-achịkwa ụlọ ọrụ igwe ojii ugbu a. Ọfọn, ugbu a IBM nwere ike ịbụ ihe dị ike ọzọ maka ha maka mgbakwunye nke na-abịa na teknụzụ Red Hat maka igwe ojii ngwakọ. Kama, Red Hat agaghị akwụsị dị ka ndị dị otú a, nkesa RHEL ga-aga n'ihu mgbe ịzụrụ, ọ dịkarịa ala n'oge dị mkpirikpi.
Ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla kpatara ụfọdụ ndị na-ere ngwaike / ihe nkesa na-echegbu onwe ha banyere nnweta a maka ihe ọ bụla, ọ ga-abụ na ha abụọ Canonical dị ka SUSENdị isi asọmpi Red Hat abụọ nwere ike irite uru dị ukwuu na azụmaahịa a site n'ịkụ azụ na mmiri siri ike. Na mgbakwunye, otu n'ime ndị na-etinye aka na azụmaahịa a ekwuola na IBM ga-aga n'ihu ịnakwere nkesa sitere n'aka ndị ọzọ na-eweta ngwaahịa ya, ọ bụghị naanị na ị ga-echekwa ha ugbu a na Red Hat ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Uhie okpu agaghị apụ n'anya mgbe ịzụrụ IBM
Inwe nchekwube gabigara ókè n’isiokwu a, ha nile dabere n’echiche nke onye chọrọ ịnụ olu nke ha.
Ọ ka mma ikwu na ị ga-echere wee hụ ihe ga-eme.
Mana ọ bụrụ na IBM chọrọ onye na-ere ahịa, ọ nwere ike ị were gị n’ọrụ.
Versiondị Fedora nke 29 dị ugbu a iji budata